င ဝန် န ဒီ: April 2010
တစ်ရာ မှာ တဝက် လဲ မဟုတ်
အပြည့် မှာ တဝက်
တဝက် မှာ မှ တဝက်
အဲဒီ တဝက် က တဝက်
ရှိတာလေး ကို စိတ်
ရှိတဲ့ တစိတ် ကို
တဝက် ဝက် လာလိုက် တာ
လျှော့ ရင်း စိတ်ရင်း
တစိတ် မှာမှ တဝက်
အစိတ် သား လဲ မဟုတ်
၁၀ သား လည်း မဟုတ်
ပိဿလေး သုံး မရတော့
ပိဿလေး ပစ်လိုက် ရတဲ့ 
ဆယ့်နှစ် နှစ် ပိုင်း တစ် ပိုင်း
ကျပ်သား တဲ့။ ။
(အဝက်သား အသုံးအနှုန်း ကို အမှတ် တရ ရေးမိတာပါ)
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:14 PM No comments:
မြန် ပြည် ပြန် ပြီး ရွှေးကောက် ပွဲ ဝင် နိူင် ကြပါစေ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေရဲ့အသက် တွေ ကို သတ် လို့ရ ရင် ရမယ်...
ဒီလူတွေ ရဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆ စိတ်ဓာတ် ကိုတော့ သတ် မရဘူး
ကိုယ် စိတ် ကို ကိုယ်နိူင် အောင် ကျင့်ကြံ နိူင် မှ သာ ကိုယ် စိတ်ကိုယ် ချိုးနိူမ် နိူင် တာပဲ ရှိ တာ ဘယ် လိုပဲ ဖြစ် ဖြစ် သတ်လို့တော့ မရဘူး....
မြန်ပြည် သူ ပြည်သားတွေ က မ သိ တာ မဟုတ် ဖူး ဥပေက္ခာ ပြုနေတာကို နိူင် ငံတကာက နေ ပြီး ရေး ချင် ပြော ချင် တာတွေ ပြော ပြီး အယ်ဒီတာ လို့ကိုယ့် ရာထူးကိုယ် တပ် ကိုယ့် ဝက်(စ်) ဆိုဒ် မှာ ကိုယ် ပြော ချင် ရာ ပြောနေ မဲ့ အစား မြန် ပြည် ပြန် ပြီး ရွှေးကောက် ပွဲ ဝင် လိုက် ပါတော့ လား ....
မြန်ပြည် မှာ မွေးတဲ့ သူတိုင်း မြန်ပြည် ကို ချစ်မြတ်နိူးတယ် ဆိုတာ ပြောမှ သိတဲ့ အဆင့် ရောက် သွားပြီလား...
မြန်ပြည် က နာရေး ကူညီမှု အသင်းက သင့် အား နိူင် ငံ တကာ က ပြန် တာတဲ့ သူရယ် ဆိုပြီး မကူညီ မရှိပါဘူး
မည်သူမဆို ကူညီ လျှက် ပါ...
လေထွားသူတွေ ပေမများ ပဲ
မြန် ပြည် ပြန် ပြီး ရွှေးကောက် ပွဲ ဝင် နိူင် ကြပါစေ။ ။
သန်းခေါင်ကျော် နှစ်ချက်တီး အချိန်။ စစ်မြေပြင် ဘန်ကာတစ်လုံးကဲ့သို့ တည်ဆောက်ထားသည့် လုံခြုံရေး စောင့်ကြည့်ခန်း အတွင်းရှိ ဖန်သားပြင် ၂၈ ခုက အောက်ထပ်ခန်းမ အတွင်းကြိတ်ကြိတ်တိုး လှုပ်ရှားနေမှုများကို စက္ကန့်မလပ် ဖော်ပြပေးလျက်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း တွမ်က ၄င်း၏တာဝန်ချိန်ကို စတင်လိုက်သည်။
သူတာဝန်ယူ စောင့်ကြည့်ရသော နေရာအကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းပေ တစ်သိန်းရှိသည်။ ခန်းမကြီး၏ မျက်နှာကြက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ကင်မရာများက ရိုက်ကူးပေးပို့လျက်ရှိသော လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သူ့စားပွဲပေါ်တွင် ရုပ်မြင်ဖန်သားပြင် သုံးခုနှင့် နံရံပေါ်တွင် ၂၈ ခုရှိနေသည်။ လှုပ်ရှားမှုများကို လိုအပ်သလို မြင်ကွင်းရှုထောင့် ပြောင်းလဲကြည့်နိုင်ရန် ဗီဒီယိုဂိမ်း ကစားသည့် တုတ်တံသုံးခုနှင့် ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်တစ်ခုက စားပွဲပေါ်တွင် နေရာယူထားသည်။
လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွမ်သည် ပိုကာ၊ တစ်ချပ်မှောက်၊ ရူးလက် စသည့်စားပွဲပေါ်တွင် ကစားရသည့် လောင်းကစားမှုများကို ကျွမ်းကျင်သူ -Table Games Specialist ဖြစ်သည်။ သူက ပိုကာကစားနေသူများကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်သည်။ ထို့နောက် လောင်းကြေးအလယ် အလတ်ရှိသော ဘလက်ဂျက်နှင့် အံစာကစားဝိုင်းများဘက်သို့ ကင်မရာကို ရွှေ့ချိန်လိုက်ပြီး ကစားနေသည်များကို ဂရုတစိုက် အတန်ကြာစောင့် ကြည့်နေသည်။ မသင်္ကာစရာ မတွေ့တော့မှ အခြားဝိုင်းများသို့ သူ၏ မြင်ကွင်းကို ရွှေ့လိုက်သည်။ ဘာက ရက်ဖဲဝိုင်းတွင် သူ၏ စူးစမ်းသော မျက်လုံးများက ရပ်သွားသည်။ ဘာကရက်ဝိုင်းသည် လောင်းကြေးမြင့် ခန်းမထဲတွင်ရှိသည်။ အနည်းဆုံး ကြမ်းခင်းလောင်းကြေးမှာ ဒေါ်လာတစ်ရာ ဖြစ်သည်။
အဖြူရောင်ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသည့် အာရှတိုက်သား အပေါ်တွင် သူ့အာရုံက ကပ်မိသွားသည်။ စားပွဲပေါ်တွင် တင်ထားသည့် ထိုလူ၏ လက်အနေအထားမှာ သူ့အဖို့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရှေ့တွင်ရှိသော ဖဲချပ်များကို အုပ်ထားပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လက်ကိုဘေးဘက်တွင် ချထားသည်။ ကြည့်နေစဉ်တွင် လက်တစ်ဘက်က ကုတ်အကျီ ကော်လာတစ်လျှောက် ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ သူ့လက်အနေအထားနှင့် ရွေ့လျားပုံတို့ကို တွမ်ကမကြိုက်။
ဝတ်စုံဖြူ၏ ဖောက်သည် ကတ်ပြား Loyalty Card ကို ကွန်ပျူတာပေါ်သို့ ခေါ်ယူ ကြည့်လိုက်သည်။ ကာစီနိုသို့ အမြဲလာရောက် ကစားသူများကို ဖောက်သည် ကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးထားသည်။ ကတ်ပြားပိုင်ရှင်သည် ဟိုတယ်တွင် ညအိပ်နားနေခွင့်၊ အစားအသောက်၊ အဖျော်ယမကာတို့ကို အခမဲ့သော်လည်းကောင်း၊ လျှော့ဈေးဖြင့်သော် လည်းကောင်း မက်လုံးပေးထားသည်။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် မြင်ရသည့် အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အနိုင်အရှုံး မှတ်တမ်းကို တွမ်က စိတ်ဝင်တစား လေ့လာသည်။ ဝတ်စုံဖြူသည် အရှုံးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် တွမ်က သူနှင့်ပတ်သက်၍ မသိုးမသန့် ခံစားမိသဖြင့် တစ်စားပွဲတည်းအတူ ထိုင်ကစားဖူးသူများနှင့် ဆက်စပ်မှုကို ကွန်ပျူတာ အကူအညီဖြင့် ရှာဖွေကြည့်လိုက်သည်။
ဝတ်စုံဖြူနှင့်အတူ တစ်စားပွဲတည်း ကစားဖူးသူများအနက် တစ်ယောက်မှာ အကြီးအကျယ် နိုင်ပွဲဆက်ခဲ့သူ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသူသည်လည်း အာရှတိုက်သားပင် ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း တစ်စားပွဲတည်းတွင် ထိုင်ကစားလျက် ရှိသည်။ ယခုလည်းနိုင်နေသည် ။ ဒေါ်လာသိန်းချီပြီး နိုင်နေသည်။
ဝတ်စုံဖြူသည် ကုတ်အကျီကော်လာကို လက်ဖြင့်ပွတ်နေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဖဲချပ်ကို ကုတ်အင်္ကျီ ဘေးအိတ်ထဲသို့ ထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုတ်အင်္ကျီအိတ်ထဲရှိ ဖဲချပ်များနှင့် အလဲအလှယ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် နိုင်စေလိုသော သူ၏ကစားဘက်ကို နိုင်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘာကရက် ကစားနည်းသည် ကစားသူတစ်ဦးသည် ဒိုင်နှင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားကစားဘက်နှင့်ဖြစ်စေ ပူးပေါင်းနိုင်သည့် ရိုးရှင်းသော စည်းကမ်းရှိသည်ဖြစ်ရာ ထိုစည်းကမ်းကို အခွင့်ကောင်းယူလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကစားသမား လောကတွင် ထိုနည်းကို Hand Mucking ဟု သိထားကြသည်။ ဝတ်စုံဖြူက စတိအရှုံးပေးပြီး ကြံဖော်ကြံဖက်ကို အနိုင်ရစေခြင်းဖြစ်သည်။ တွမ်က လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကို တပ်လှန့်လိုက်သည်။ အနီးအနားရှိ လုံခြုံရေး ကင်မရာများသည် ဘာကရက်ဝိုင်းသို့ စုချိန်ထားလိုက်ကြသည်။
ကြံဖော်ကြံဖက်က အနိုင်တိုကင်များကို ကောင်တာတွင် လဲလှယ်နေစဉ် လုံခြုံရေးကဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ ဟန်မပျက် ဆက်ကစားနေသော ဝတ်စုံဖြူကိုလည်း ဖမ်းလိုက်သည်။ ဝတ်စုံဖြူက ကုတ်အင်္ကျီအိတ်ထဲတွင် ကျန်နေသေးသော ဖဲချပ်များကို ဝါးစားမြိုချရန် ကြိုးစားသည်။
သက်သေခံပစ္စည်းကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် လုံခြုံရေး ကင်မရာများက ဝတ်စုံဖြူ ကစားနေ စဉ်တစ်လျှောက်လုံး လက်လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ဖြစ်နေသည်။ ရုပ်မြင်ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ယူထားသော သက်သေခံကို သူတို့ တရားရုံးတွင် ဘယ်လိုမှ မငြင်းနိုင်ကြ။
ယင်းသို့ ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကာ စီနိုအုပ်ချုပ်သူများက ဘာကရက် စားပွဲတိုင်းတွင် နတ်မျက်လုံး-Angel Eyes ဟု အမည်ရသော ကင်မရာ တပ်ဆင်လိုက်သည်။ ထိုကင်မရာသည် ဝေလိုက်သည့် ဖဲအချပ်တိုင်း၏ ဘားကုတ်ကို မှတ်သားထားပြီး ဖဲချပ်ချင်းလဲပါက ဒိုင်ဖြစ်သူက ချက်ချင်း သိရှိနိုင်ရန် စီမံပေးထားသည်။
လပ်စ်ဗေးဂတ်စ် ကာစီနိုအတွင်းသို့ လူတစ်ယောက် လျှောက်ဝင်သွားသည်နှင့် ထိုသူ၏ ငွေကြေးအခြေအနေ၊ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လောင်းကစားသည်။ အပျော်ကစားခြင်းလော။ အနိုင်ရလို၍လော။ မည်သည့်အစားအစာကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ မည်သို့သော အဖျော်ယမကာကို မည်သို့ အဖက်အစပ်ဖြင့် သောက်သုံးသည်။ အနာဂတ်တွင် ဖောက်သည် ကောင်းဖြစ်လာနိုင်မည့် အလားအလာ ရှိ၊မရှိ စသည့်အချက်များကို ရှုပ်ထွေးသည့် ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် အကဲဖြတ် သုံးသပ်တော့သည်။ ဝေါစထရိတွင် စတော့ဈေးနှုန်း ရှေ့အလားအလာကို ဟောကိန်းထုတ်သည့် ကွန်ပျူတာ စနစ်မျိုးကို သုံးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကာစီနိုအတွင်း လူတိုင်း၏ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို ဗီဒီယို ကင်မရာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ကာစီနိုတွင် အသုံးပြုသော ကွန်ပျူတာစနစ်သည် ဝေါစထရိတွင် အသုံးပြုနေသည့် စနစ်ထက်များစွာ သာလွန် အနုစိတ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကာစီနိုတွင် အသုံးပြုသော လုံခြုံရေး ထောက်လှမ်းမှုစနစ်သည် ကောင်းမွန်လှသဖြင့် လေဆိပ်၊ ဘဏ်တိုက်၊ အစိုးရအေဂျင်စီနှင့် စူပါမားကက်တို့ကပင် အတုယူ အသုံးပြုရသော စနစ်များ ဖြစ်လာသည်။
ကာစီနိုများသည် အတော်ဆုံး ဝှက်စာပညာရှင်၊ ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး ပါရဂူနှင့် သင်္ချာပညာရှင်များကို ငှားရမ်းအသုံးပြုလျက် ရှိသည်။ ကာစီနို၏ ငွေများကို ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့် အချောင်နှိုက်လိုသူတွေ အမြောက်အမြား ရှိနေသည်။ သာမန်ဘဏ် တစ်ခုထက်ပင် အန္တရာယ်များသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လိမ်ကောက်လိုသူများထက် ခြေတစ်လှမ်း သာနေစေရန် အမြဲလို လုံခြုံရေး နည်းလမ်းများကို တီထွင်ဆန်းသစ်နေရသည်။
လိမ်ကောက်သူများကလည်း အလျော့မပေး။ ခေတ်မီနည်းပညာမှအစ လက်လှည့်နည်းပညာအဆုံးသုံး ကြသည်။ အင်္ကျီလက်ရှည် လက်အတွင်း ဗီဒီယိုကင်မရာ အသေးစား ကလေးကို သိုဝှက်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒိုင်က ဝေနေသည့်ဖဲများကို ကင်မရာက စားပွဲမျက်နှာပြင်နှင့် ကပ်လျက် သားအနေအထားမှ ရိုက်ယူပြီး ကာစီနိုအပြင်ဘက် ဗင်ကားထဲရှိ ကင်မရာသို့ ထုတ်လွှင့်ပေးသည်။ ကားထဲရှိနေ သူက ကစားနေသူထံ မည်သူ့ လက်ထဲတွင် မည်သည့်ဖဲများ ရှိနေသည်ကို အသံလွှင့်စက်ဖြင့် သတင်းပြန်ပို့သည်။ ကစားနေသူက နားအတွင်း သိုသိပ် စွာထည့်ထားသည့် အသံဖမ်းစက်က လေးမှတစ်ဆင့်နားထောင်သည်။ ပင်အပ်ထိပ်ဖျားကိုချိုးကာ လက်သည်းခွံအတွင်း ဆင်ကော်ဖြင့်ကပ်ကာ ဖဲချပ်များကို အမှတ်အသားပြုသော နည်းကိုလည်း သုံးတတ်ကြသည်။
လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မြို့ရှိ ကာစီနို တစ်ခုသည် ကမ္ဘာငယ်လေး တစ်ခုနှင့် အလားတူသည်။ လူသားတစ်ယောက် လိုသမျှ အားလုံးရနိုင်သည့် နေရာ ဖြစ်သည်။ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ ဇာတ်ရုံ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်၊ ငွေလဲလှယ်ရာ ဌာနတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည် ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကာစီနို ကမ္ဘာအတွင်းဝင်ရောက် လာသူမှန်သမျှကို အီလက်ထရွန်းနစ် မျက်လုံးပေါင်းအရာ အထောင်တို့က စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု လေ့လာလျက်ရှိသည်။ ဝတ်ဆင်ထားသော အဝတ်အစားသည် မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်။ ဝယ်ယူထားသည်မှာ မည်မျှကြာမြင့်ပြီ။ လက်ကိုင်အိတ်သည်မည်သည့် အမျိုးအစားဖြစ်သည်မှအစ အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို ပေါင်းစုကာ ကွန်ပျူတာက လူတစ်ဦးချင်း ဥပဓိရုပ်သွင် Personal Profile ကို ဖော်ယူသည်။ ဈေးကွက်မြှင့်လိုသူ၊ ဈေး ကွက်ဖော်လိုသူများအဖို့ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်များသည် များစွာတန်ဖိုးရှိလှသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ ကိုရယူခြင်းကို အခြားနေရာများတွင် တင်းကြပ်သော ဥပဒေဖြင့် ကန့်သတ်ထားသော်လည်း၊ လောင်းကစားဝိုင်းများ၏ ထူးခြားသော အခြေအနေကြောင့် ခွင့်ပြုထားရသည်။
မိမိတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကို စုဆောင်းရယူနေကြောင်း သိလင့်ကစား၊ လောဘဇောကြောင့် လူပေါင်းသိန်းသန်းချီလျက် ကာစီနိုကမ္ဘာသို့ တသွင်သွင် လာရောက်နေကြသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို အီလက်ထရွန်းနစ် နည်းစနစ်ဖြင့် ရယူထားခြင်းသည် အန္တရာယ်ကြီးလှသည်။ ထိုအချက်အလက်များသည် မရောက်သင့်သူ၏ လက်ဝယ်သို့ ရောက်သွားပါက ကာယကံရှင်အဖို့ များစွာ ထိခိုက်နစ်နာ သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကာစီနိုများက ပြုစုထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ကာယကံရှင်များအား သိခွင့်ပေးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်နေ သူများပေါ်လာသည်။
လာရောက်ကစားသူများ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု အမြင့်မားဆုံးရရှိစေရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ရ ယူထားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကာစီနို များဘက်က ပြန်လှန်ချေပသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းဟူသည် လူသားတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်စပ်လျက် ဖြစ်တည်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်စပ်မှုမရှိပါက လူ့အဖွဲ့အစည်းဟူ၍ ရှိတော့မည်မဟုတ်။ သွေးသားတော်စပ်မှု၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု၊ အကျိုးစီးပွားတူညီ မှု၊ အပြန်အလှန် ကူညီမှု စသည့် အချက်များဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး ရှင်သန်တည်ရှိနေသည်။ ကာစီနိုရှိ ကွန်ပျူတာစနစ်သည် ထိုဆက်စပ်နေမှုကို အရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့် ဖော်ထုတ် ပေးနိုင်သည်။
တစ်ခါသော် ကာစီနိုတွင် ဖဲဝေသည့်ဒိုင်အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသူ တစ်ဦးသည် မော်တော်ယာဉ် အကြွေး ဝယ်ရန်အတွက် ချေးငွေလျှောက်လွှာ တင်ပြလာသည်။ လျှောက်လွှာတွင် ၄င်း၏ချေးငွေအပေါ် အာမခံသူ၏ အမည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ထိုသူသည် ကာစီနိုတွင် မကြာခဏလာ ရောက်ကစားလေ့ရှိပြီး လျှောက်လွှာရှင် ဒိုင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သော စားပွဲတွင် အများဆုံးကစားခဲ့သည်ကို ကွန်ပျူတာက ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုဝန်ထမ်းကို အလုပ်မှ ရပ်စဲလိုက်ရသည်။
လာရောက် ကစားကြသူများနှင့် ဒိုင်လုပ်သူတို့သည် လိပ်စာတစ်ခု တည်းတွင် နေထိုင်နေခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်။ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တူညီခြင်း ရှိ၊ မရှိ။ ကာစီနို ဟိုတယ်တွင် တစ်ခန်းတည်း အတူနေလေ့ ရှိ၊ မရှိ စသည်တို့ကို ကွန်ပျူတာက အမြဲ စစ်ဆေးသည်။ အကြမ်းဖက်သမားများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်စပ်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ရာတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဌာန Homeland Security က ထိုကွန်ပျူတာစနစ် ကိုပင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ ဘဏ်၊ အာမခံလုပ်ငန်းတို့ကလည်း အသုံးပြု သည်။
ကာစီနိုအချင်းချင်း ယင်းတို့ထံတွင် လာရောက် လောင်းကစား ကြသူများ၏ အချက်အလက်များ ဝေငှဖလှယ် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ကြသူများလည်း ရှိသည်။ လောင်းကစား မှော်အောင်သူများဟု ဆိုရမည့် ဖဲလိမ်ဝိဇ္ဇာများသည် ကမ္ဘာအနှံ့ခြေဖြန့် ကစားနေ ကြသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ အဝန်း လောင်းကစားဝိုင်းများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သတင်းဖလှယ်ကြရ သည်။ ယနေ့ လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်တွင် ကစားပြီး၊ နောက်တစ်နေ့ မွန်တီ ကာလိုသို့ရောက်နေသည်။ နောက် တစ်ပတ်တွင် မကာအိုသို့ရောက်ချင် ရောက်နေတတ်သည်။ ထိုလောင်းကစား ဝိဇ္ဇာများနောက်တွင် မာဖီးယားလို မဟာလူဆိုးဂိုဏ်းများလည်း ရှိနေတတ်သည်။
ကာစီနိုများသည် ခါးပိုက်နှိုက်များ ကျက်စားရာ အရပ်ဖြစ်သည်။ ငွေအထပ်လိုက် အိတ်ထဲထည့်ကာ ကာစီနိုက မေတ္တာလက်ဆောင် တိုက်ကျွေးသော အဖျော်ယမကာကို သောက်သုံးလျက် မူးယစ်နေသူများသည် ခါးပိုက်နှိုက်များ သွားရေကျစရာ ပစ်မှတ်များ ဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းဝင်လူ ဆိုးတစ်ဦးဝင်ရောက်လာပါက လုံခြုံ ရေးတာဝန်ကျအခန်းတွင် ခေါင်း လောင်းသံ ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိသည်။ ကွန်ပျူတာက မျက်နှာသွင်ပြင်ကို မှတ်မိသော ဆော့ဝဲ Facial Reco-gnition Software ကိုအသုံးပြုလျက် ကာစီနိုအတွင်း ဝင်ရောက်လာသူ တိုင်းကို စစ်ဆေးပေးသည်။
မသင်္ကာဖွယ်ရာ၊ အန္တရာယ် မကင်းသော အပြုအမူများကိုလည်း ကွန်ပျူတာက ဖော်ထုတ်ပေးသည်။ အရေးပေါ် ထွက်ပေါက်နားတွင် မယောင်မလည်ရပ်နေခြင်း ၊ ပိုက်ဆံ အိတ်ကို မေ့ထားခဲ့ခြင်း စသည့် အပြု အမူများကို ကွန်ပျူတာကမှတ်တမ်း တင်ကာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအား ညွှန်ပြပေးသည်။
လောင်းကစား စားပွဲခုံအတွင်း မြှုပ်ထားသော ကွန်ပျူတာချစ်ပ်များ က စားပွဲပေါ်တွင်ရှိနေသော တိုကင် ပြားကို အတုအစစ် ခွဲခြားပေးခြင်း၊ အလျော်အစားကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း တို့ပြုလုပ်ပေးသည်။ ကာစီနိုဝန်ထမ်းများသည် တိုကင်ပြားများကို အပြင်သို့ ထုတ်ယူ မသွားနိုင်အောင် အဝင်အထွက် တံခါး ပေါက်ဘောင်တွင် ကွန်ပျူတာချစ်ပ် ကို မြှုပ်နှံထားသည်။
ကာစီနိုဟူသည် ကစားသမားတို့၏ လောဘမီးအရှိန်တညီးညီးတောက် လောင်နေသောအရပ်ဖြစ်သည်။ လောင်းကစားဝိုင်းတို့ သဘာဝအတိုင်း အော်ဟစ်ခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်း၊ ရန်ဖြစ်ခြင်းတို့ မဖြစ်စေရန် ကာစီနိုတို့က အတတ်နိုင်ဆုံး စီစဉ်ထားသည်။ မိမိ လောင်းကစားနေကြောင်း သတိမရ စေရန် အဖျော်ယမကာနှင့် အစား အသောက်တို့ ဈေးအပေါဆုံး စီစဉ် ပေးထားသည်။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တစ်ခုအတွင်းသို့ ရောက်နေသည့်အလား ထင်မှတ်မှားစေရန် စီမံထားသည်။
လောင်းကစားနေသည်ဟူသော သိမှတ်မှုကို မှုန်ဝါးနေစေရန်၊ စိတ်လွတ်လက်လွတ် ပေါ့ပါးနေစေရန် ဖြစ်သည်။ စိတ်လွတ်လက်လွတ် ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ ကစားသမားများသည် အဆုံးအဖြတ် မှားလာကြမည်။ လောင်းကြေးတိုကင်များသည် ဒိုင်ထံသို့ ခုန်ပျံရောက်ရှိကုန်ကြမည်။
ကာစီနိုများတွင် ထွန်းညှိထားသော လျှပ်စစ်မီးပါဝါသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများစွာကို မီးပေးထားနိုင်သည့် ပါဝါနှင့်ညီမျှသည်။ တောက်ပထွန်းလင်းလျက် လျှပ်လက်နေသော မီးများသည် ကစားသမားများကို ညှို့ယူဖမ်းစားသည်။ တွေဝေစေသည်။ အဆုံးအဖြတ် မှားစေသည်။
လောင်းကစားသမားများ၏ အားနည်းချက်မှာ စိတ်ကို မဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ အတ္တမာန လွန်ကဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မည်မျှသာ အရှုံးခံမည် ထိုပမာဏအထိ ရှုံးလျှင် ကစားဝိုင်းမှ ခွာမည်ဆိုသည့် မြဲမြံသော သန္နိဋ္ဌာန် ထားနိုင်သူ မရှိသလောက်ရှားသည်။
ပါးနပ်စွာစီမံထားသော အကွက်တစ်ကွက်မှာ တိုကင်ကို ငွေသားအဖြစ် ပြန်လဲပေးသော ကောင်တာကို မဟာဗျူဟာ မြောက်စွာနေရာချထား ပေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အနိုင်တိုကင်များကို ပိုက်လာသူသည် မြောက်မြားလှစွာ ကစားဝိုင်းများကို ကွေ့ဝိုက် ဖြတ်သန်းကာ ငွေလဲကောင်တာသို့ သွားရသည်။ ကစားဝိုင်း တစ်ဝိုင်းဝိုင်းတွင် ဝင်ကစားမိစေရန် တမင် အကွက်ချထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကောင်တာကို ကစားဝိုင်းများ ပြည့်နှက်နေ သောခန်းမကျယ်ကြီး၏ အလယ်ကောင်တွင် ထားလေ့ရှိသည်။
တိုကင်ကို ငွေသားဖြင့် ပြန်လဲ ပေးသူဝန်ထမ်းမှာလည်း တစ်ယောက် တည်းသာရှိသည်။ မိမိ၏အနိုင်တိုကင် များကို ငွေသားအဖြစ် ပြန်လဲလိုသူသည် လူတန်းရှည်ကြီးနောက်တွင် တန်းစီရသည်။ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ လောင်းကစားဝိုင်းများ အကြားတွင် တန်းစီ စောင့်နေရသည်မှာ သည်းမခံနိုင်စရာ။ ကစားဝိုင်းများ မြှူဆွယ်နေသည့် နောက်သို့ ပြန်ပါမသွားစေအောင် စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရသည်မှာ ခက်ခဲလှသည်။ ကာစီနိုကို တည်ဆောက်ထားပုံမှာလည်း မျက်စိလည်စရာ ဝင်္ကပါတစ်ခုလို တည်ဆောက်ထားသည်။ အထဲရောက်နေသူသည် အပြင်သို့ ပြန်ထွက်ရန် ထွက်ပေါက်ကို ခက် ခက်ခဲခဲရှာရသည်။
ဆူညံသော အသံဗလံများကလည်း လူကို ညှို့ယူထားသည်။ အကြွေထည့်ကစားရသောစက်များ Slot Machine မှ ငွေအကြွေစများ တချွင်ချွင်မြည်ကာ ကျဆင်းလာသံကို တရံမလပ် ကြားနေရသည်။ ထိုအသံများက နိုင်သူအများအပြားရှိနေ သည်ဟုဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျဆင်းလာသော ငွေအကြွေအသံများကို လူတို့ အကောင်းဆုံး ကြားရသည့် ဖရီကွင်စီနှင့် အံကိုက်လုပ်ထားသည်။ ကြားနေရသမျှ အသံတို့သည် သ ယာနာပျော်ဖွယ်ဖြစ်စေရန် ဖန်တီး စီမံထားသည်။
ခဏခဏ အနည်းငယ် အနိုင် ပေးရန်စီစဉ်ထားသည့် အကြွေစက်များကို အချက်အခြာကျသော တိုကင်လဲရာကောင်တာ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ လူအများဆုံး ဖြတ်သန်းသွားသော နေရာများတွင် ချထားပေးသည်။
နိုင်လာသူကို ရှန်ပိန်၊ ပန်းစီး စသည့် ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် ပေးအပ်ခြင်းကိုလည်း ကာစီနိုများက စီစဉ်ထားသည်။ မလုံ့တလုံ ဝတ်ဆင်ထားသော ဧည့်ကြိုမယ်လေးများက ရှန်ပိန်ခွက် တစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက် ကမ်းပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆွဲထားလေ့ရှိသည်။ ဧည့်ကြိုမလေးများ၏ ဂုဏ်ပြုချီးကျူး စကားသံမှာလည်း နိုင်လာသူကို ကာစီနိုအတွင်းမှ ထွက်ခွာ မသွားစေနိုင်အောင် ဖြစ်နိုင်သမျှဆွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကစားသမားသည် ကာစီနိုအတွင်း ရှိနေသရွေ့ သူ ၏ငွေများကို ကာစီနိုက ပြန်လည်ရယူရန် အခွင့်အလမ်း ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် လှပချောမွေ့သော မလုံ့တလုံ ဧည့်ကြိုမယ်လေးများကို အကွက်အကွင်းကျစွာ နေရာချထားလေ့ရှိသည်။
စားကောင်းသောက်ဖွယ်နှင့် အဖိုးတန်အဖျော်ယမကာတို့ကို အလျှံ အပယ် စီမံပေးထားလေ့ရှိသည်။ ရှုံးသူကိုလည်း အစားအသောက် ကူပွန်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် နှစ်သိမ့်မှုပေးသည်။ ရှုံးသူကြိုက်ရာ အစားအစာကို အဝစားနိုင်သည်။
နိုင်သူအတွက် ဆိုလျှင်တော့ ကာစီနိုက ထိုမျှမက ရက်ရက်ရောရော စီမံပေးသည်။ ဟိုတယ်နှစ် ယောက်ခန်း၊ နှစ်ယောက်စာ ညစာ၊ တန်ဖိုးကြီးယမကာတို့ကို အခမဲ့ပေးသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ အနိုင် ပိုင်း၍ထွက်မသွားစေရန်ဖြစ်သည်။ နိုင်သူအဖို့မှာလည်း ''တယ်တော်တဲ့ ငါပါလား။ သူတို့(ကာစီနို)က ဒီလောက်သဘောကောင်း ရက်ရောနေမှတော့ နောက်ထပ်တစ်ရက် နှစ်ရက် ဒီမှာဆက်နေပြီး ကစားလို့လဲ အရှုံး မရှိပါဘူး။ ရှုံးရင်လဲ ငါနိုင်ထားတာ တွေ ပြန်ရှုံးတာပဲ'' ဟု အတွေး ပေါက်လာတတ်သည်။
ကာစီနိုများသည် ဒေါ်လာသန်း ပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံလျက် လူ၏စိတ်ကို သုတေသနပြုထားကြသည်။ လူသည်မည်သည့်အခါမျိုးတွင် စွန့်စားလိုစိတ် ပေါ်လာသနည်း ဆိုသည့်အချက်ကို အထူးသုတေသန ပြုသည်။ စွန့်စားလောင်းကစားလို သည့်စိတ်ပေါ်လာစေရန် မည်သို့လှုံ့ဆော်နိုင်မည်နည်း ဆိုသည်ကိုလည်း သုတေသန ပြုသည်။ ထိုသုတေသနပြုချက်အရ ကာစီနိုများသည် အနီရောင်ကို အများဆုံး အသုံးပြုသည်။ အနီရောင်သည် စွန့်စားလိုစိတ်နှင့် အောင်နိုင်နေသည် ဟူသောစိတ်ကို ပေါ်ပေါက်စေသည်။ စိတ်ကြီးဝင်စေသည်။ စိတ်ကြီးဝင်နေသူသည် လောင်းကြေးများများ ထပ်လိုစိတ်ရှိသည်။ ကစားဝိုင်းခန်းမများတွင် ထွန်းညှိထားသည့် မီးရောင်သည် မြင်သာထင်သာ ရှိရုံမျှသာ ဖြစ်သည်။ ပြတ်ပြတ်သားသား ထင်ထင်ရှားမြင်ရန် ကြိုးစားမည်ဆိုပါက စိတ်အာရုံကို ပင်ပန်းစေသည်။ ထိုနည်းဖြင့် အဆုံးအဖြတ်မှားစေရန် စီမံထားသည်။ လူ၏သဘာဝအရ အရက်လာငှဲ့ပေးသော ဧည့်ကြိုမယ်ကလေးများကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရန် ကြိုးစားသည်နှင့်အမျှ ဆင်ခြင်တုံသည်လည်း လျော့ကျလာမည်ဖြစ်သည်။
လူတို့အာရုံငါးပါးစလုံးကိုက စားဝိုင်းများက ညှို့ယူဖမ်းကိုင်ထားရန် စီမံထားသည်။ အရောင်၊ အနံ့၊ အသံ၊ အထိအတွေ့တို့ကို ကွက်တိလုပ်ထားသည်။ အချိန်ကိုလည်း အထိရောက်ဆုံး အသုံးချထားသည်။ ကုလားဖန်ထိုးသော စက်များကို မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ကုလားဖန်ထိုးနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ နောက်တစ်လှည့် ပြန်စဖို့ စောင့်နေရသော အချိန်ကို တိုတောင်းစေသည်။ ဤနည်းဖြင့် ပွဲများများ ကစားနိုင်အောင်လုပ်သည်။ ပွဲများလေလေ ကာစီနိုအဖို့ အကျိုးရှိလေဖြစ်သည်။ ကုလားဖန်ထိုးသည့် အချိန်တိုတောင်းလာသဖြင့် ကစားသမားများ တစ်ပွဲနှင့် တစ်ပွဲအကြား နားချိန်တိုတောင်းလာသည်။ စဉ်းစားချိန် နည်းလာသည်။ ထိုအခါ ချင့်ချိန်အားနည်းလာသည်။ ကစားသမားများ တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ ကစားနေပုံသည် စက်ရုပ်ပိုဆန်လာသည်။ လျှင်မြန်စွာ မောင်းနှင်လည်ပတ်နေသော စက်တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပမာ ဖြစ်လာသည်။ လျင်မြန်စွာမောင်းနှင်နေသော ယန္တရားကြီး၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် လောင်းကစားသမားသည် မောင်းနှင် ခံနေရသည်။
ကစားဝိုင်းခန်းမအတွင်းသို့ အောက်စီဂျင်ကို အချိန်မှန်မှန် မှုတ်သွင်းပေးသည်။ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစေရန် ဖြစ်သည်။ စိတ်လက်ပေါ့ပါးနေသူသည် စိတ်နှလုံး မှုန်မှိုင်းနေသူထက် ပိုမိုလောင်းကြေးထပ်လိုသည်။ ကာစီနိုသည် အချိန်ကာလ၏ မေ့လျော့ခြင်း ခံထားရသော နေရာဟု ဆိုနိုင်သည်။ ကာစီနိုတွင် နာရီချိတ်ဆွဲထားလေ့ မရှိ။ အချိန်ကို ညွှန်ပြနိုင်သည့်၊ နေရောင်ကို မြင်ရသည့် ပြတင်းပေါက်လည်း မရှိ။ နေထွက်ခြင်း၊ နေဝင်ခြင်းကဲ့သို့ အချိန်ကာလ အပြောင်းအလဲကို မြင်နိုင်စွမ်း မရှိအောင်စီမံထားသည်။ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် အဆက်အသွယ် ဖြတ်ထားသည်။ကာစီနိုအတွင်း ဝင်ရောက်လာသူမှန်သမျှသည် အချိန်ကိုမေ့လျော့သွားစေ ရန်စီမံထားသည်။ ကစားဝိုင်းဒိုင်လုပ် သူများကိုလည်း နာရီမပတ်ကြရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
သို့သော် သြစတေးလျနှင့် ဘယ်ဂျီယန်ရှိ ကာစီနိုတို့သည် သဘာဝ နေရောင်ဖြင့် လင်းလင်းချင်းချင်းရှိ သော ကာဆီနိုဒီဇိုင်းမျိုး အသုံးချလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သူ့ထက်ငါအပြိုင် ကြိုးစားနေကြသည့်အတွက် စမ်းသပ်တီထွင် ကြည့်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကစားဝိုင်း တိုကင်ကို တီထွင်ခဲ့သူသည် တကယ့်ဥာဏ်ကြီးရှင်ပင် ဖြစ်သည်။ တိုကင်ကို တန်ဖိုး သတ်မှတ်ထားသော်လည်း လူ၏စိတ်ထဲတွင် ငွေသားစစ်စစ်လောက် အရေးမထားတော့။ ထိုအခါ အလွယ်တကူပင် လောင်းကစား ပစ်လိုက်သည်။
၁၉ရာစုတွင် ကာစီနို ဟူသော စကား၏အဓိပ္ပာယ်မှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုစဉ်အခါက ပျော်ပွဲရွှင် ပွဲများကို ကျင်းပရာနေရာကို ကာစီနို ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ကာစီနိုကို ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲကြီးပမာ ဆင်ယင်ထားလေ့ရှိ သည်။ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖွယ်ရာ၊ မူးယစ်ပျော်ပါးရာ နေဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်ထားသည်။ လောရာကြီးကို မေ့လျော့ကာ ပျော်နိုင်ပါးနိုင်စေရန်၊ စီမံထားသည်။ လောကကြီးကို မေ့လျော့ခြင်းသည် အရှိတရားကို မေ့လျော့ထား ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိမည်မျှသာ သုံးနိုင်သည်။ အရှုံးခံနိုင်သည်ကို မေ့လျော့သွားစေရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
လူ၏အတ္တမာနကို ကာစီနို၏ ပတ်ဝန်းကျင်က မီးထိုးပေးသည်။ စူပါအတ္တမာနကို မွေးဖွားပေးသည်။ ငါ့လိုလူ ဇမ္ဗူမှာ ရှိသေးရဲ့လားဟု သွေးနားထင် ရောက်စေသည်။ ငါသူများတွေထက် တော်တယ်၊ နိုင်အောင် ကစားပြမယ်ဟု စိတ်ကြီးဝင်လာခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်း၏ အစပင်ဖြစ်တော့သည်။ နိုင်လိုက်သည့် အခါတိုင်းတွင် ဧည့်ကြိုမယ်လေးများက လက်ခုပ်သြဘာပေးကာ ဂုဏ်ပြုသည်ကို အဟုတ်ကြီး ထင်လာသည်။
လူကို မောင်းနှင်နေသော အင်အားသုံးခုရှိသည်ဟု စိတ်ပညာရှင်များက လက်ခံထားကြသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခြင်း၊ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် အတ္တမာနတို့ပင် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသော့ချက်ကို ကာစီနိုတို့က ဇက်ကိုင်ထားသည်။ ကာစီနိုက လူ၏အတ္တမာနကိုကျော သပ်ပေးခြင်းဖြင့် လောင်းကစားကို လူများက ခုံမင်ရာမှ စွဲလန်းလာသည်။ မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့ ဖြစ်လာကာ မကစားရ မနေနိုင် ဖြစ်လာသည်။
လူ၏လောဘမီးသည် ကာစီနို ယန္တရားကို အစဉ်မပြတ်လည်နေစေသော မောင်းနှင်အားဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ လောင်းကစားသမားများသည် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်မျှ နိုင်ဖူးခဲ့ကြသည်သာဖြစ်သည်။ အနိုင်ငွေ ကြေးပမာဏသည် ရာဂဏန်း ထောင်ဂဏန်းမျှသာ ဖြစ်နေစေကာမူ ထိုနိုင်ခဲ့သည့်အရသာကို ကစားသမားများသည် မမေ့နိုင်ကြ။ ထိုအရသာကို တပ်မက်ကြသည်။ ထိုအရသာကို တစ်ပြန်တစ်ကျော့ ခံစားနိုင်ရန် သောင်း၊ သိန်းမကသောငွေကြေးကို အရှုံးခံနေကြသည်။
ကာစီနိုများ၏ အစွမ်းအထက် ဆုံး ဆွဲဆောင်နိုင်မှုမှာ လူတို့အိပ်မက် ကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်သည် ဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ ကြွေတစ်လက် ကြက်တခုန်၊ ခဏတွင်းချင်းပင် သူဌေးဖြစ်နိုင်သည် ဆိုသော မက်လုံးသည် လူတိုင်းကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ တစ်ကျပ် တစ်ပြားပေးရသော ထီလက်မှတ် မှသည် ကြေးကြီးလောင်းကစားဝိုင်း အထိပေးစွမ်းနိုင်သည့် တစ်ခုတည်း သောမက်လုံးမှာ အိပ်မက်ကို လက်တွေ့ဖြစ်လာစေနိုင်သည်ဟူသော မျှော်လင့်ရောင်ခြည် မှုန်ပျပျကလေး ဖြစ်သည်။ သတင်းမီဒီယာများကလည်း ကာစီနိုနှင့်ပတ်သက်၍ အသားပေး ဖော်ပြတတ်သည်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်လမ်းများ ကဲ့သို့သော ရုပ်ရှင်များကလည်း ကာစီနို၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အခင်းအကျင်းများကို ပြသလေ့ရှိသည်။ ထိုအချက်သည်လည်း လူအများကို ကာစီနိုဆီသို့ ဆွဲဆောင်ပေးနေခြင်း တစ်မျိုး ဖြစ်တော့သည်။
ငွေကြေးသည် ကြားခံဖလှယ်ခံ ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ငွေကြေးလက်ပြောင်း လက်လွှဲပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုသည် ဖလှယ်သည့်ပစ္စည်းအဖြစ် ပါဝင်ရစမြဲဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ပါဝင်သော ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုသည် ကျန်ရစ်ခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးဟု တီထွင်မှုထားခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို လူတို့ စားသုံးကြခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်ဖြစ်သည်။
လောင်းကစားခြင်းသည် ငွေကြေး လက်ပြောင်းလက်လွှဲလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ သို့သော် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကုန် ပစ္စည်းမပါဝင်ပေ။ ထို့ကြောင့် စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက် အကူပြုသင့်သလောက်မပြု။ ကာစီနိုကို မှီခို၍ စီးပွားရှာကြသူများ လစာဝင်ငွေရရှိကြသည်။ ကာစီနိုသုံးပစ္စည်း ပြုလုပ်ရောင်းချသူများ၊ အစားအသောက် ပေးသွင်းသူများသည်လည်း ဝင်ငွေရရှိကြသည်မှာ မှန်သော်လည်း၊ ကာစီနိုများတွင် လှည့်ပတ်နေသည့် ငွေပမာဏနှင့် နှိုင်းစာပါက စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အထောက်အကူ ပြုမှုသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကြီးများလောက် အကျိုးမများပေ။ ထို့ကြောင့် ကာစီနိုများကို ပိတ်ပစ်ရန် ဆော်သြနေကြသူများရှိသည်။ သို့သော် ကာစီနိုများမှ ရသောအခွန်အခများသည် အခြားသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများထက် ပိုမိုများပြား (ရာနှုန်းနှင့် တွက်ချက်ပါလျှင်) သဖြင့် အမြဲတမ်း ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြနေသော ပြည်နယ်နှင့် ဗဟိုအစိုးရတို့အတွက် မက်လောက်စရာ ဖြစ်နေသည်။
လူတို့၏ အတ္တမာနနှင့် လောဘတို့ ရှိနေသရွေ့ကာလပတ်လုံး လောင်းကစားခြင်းသည် လူ့လောကတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေမည်သာ ဖြစ်သည်ဟု စိတ်ပညာရှင်များက ဆိုကြသည်။
Ref: How to Outsmart Casinos at Their Dirty Tricks
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:23 PM No comments:
လိမ် ရင် လဲ ပီပီပြင်ပြင် လိမ်ပေါ့
တနေ့မန်းရေနံ မြေကပြန်လာပြီး ပြည်လမ်းက ရုံးမှာ လစာထုတ်ပြီးပြန်လာတော့
ယုဒသန်ဝင်းနားက လမ်းချိုးလေးက လူတစ်ယောက် ထွက်လာပြီး
..ကျွန်တော် မြောင်းမြ ပြန်ဖို့ပြန်စရာ စရိတ် ဘာမှမရှိတော့လို့ပိုက်ဆံ ၂၀၀ လောက် ကူညီ ပါ ခင်ဗျာတဲ့
တကယ်တော့ မြောင်းမြ ကားခ က ၄၀၀ ကျော် ရှိ တယ်...
ကျွန်တော် က ပြောလိုက် တယ် ကားခက ၄၀၀ ကျော် ရှိ တယ်...
ပုသိမ်သား ကို မှားပြီး တောင်း ရလား ...မြောင်းမြသွားတဲ့ ကားတွေ ပုသိမ် သွားတဲ့ ကားတွေ အတူတူ ဂိတ်ထိုးရတဲ့ အချိန်လေ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လေ ....အခက်အခဲတစ်ခုခု ရှိလို့တောင်းတာပဲလေ...
တချို့ ကပြောတယ် လိမ်တာကို အားပေးတာတဲ့
တကယ်တော့ ဘယ်သူမဆို သူများဆီက ပိုက်ဆံ ကို မတောင်းချင် ကြပါဘူး
မွေးကတည်းက ဘယ်သူမှ အဲဒီစိတ် ပါမလာကြပါဘူး
တစ်ခုခု ကြောင့် ပါ...
လိမ်မှန်းသိလျှက် နဲ့နားလည်ပေးလိုက်မိတာပါ...
ပျဉ်းမနားမီး နေအိမ် ၃ လုံး လောင်ကျွမ်း
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား၌ ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့က မီးလောင်မှု ၂ ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နေအိမ် ၃ လုံးနှင့် ကြက်ခြံတခြံ မီးလောင်ခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော် မီးသတ်ဦးစီးဌာနထံမှ သိရှိရသည်။
နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် ပျဉ်းမနားမြို့ ပေါင်းလောင်းတိုးချဲ့ ၁ ရပ်ကွက် အိမ်အမှတ် (၁၄/၇၄၇) အပါအဝင် နေအိမ် ၃ လုံးနှင့် နေ့ခင်း ၂ နာရီခွဲတွင် ပေါင်းလောင်းတိုးချဲ့ ၃ ရပ်ကွက် ဦးကျေးကွက်သစ်ရှိ ကြက်ခြံတခြံ မီးလောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။
ပထမဖြစ်ရပ်တွင် ပလပ်စတစ်ပုံးထဲသို့ ကတော့ဖြင့် ဓာတ်ဆီထည့်ရာမှ စတင်မီးလောင်ခဲ့ရာ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ (၃ ပင် x ၃ ပင်) ၁ လုံး၊ (၄ ပင် x ၄ ပင်) အာစီ နှစ်ထပ်တိုက် ၁ လုံး၊ ပျဉ်ထောင်နှင့် ထရံကာ နှစ်ထပ်အိမ် အပေါ်ခြမ်းများ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။
မြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးသတ်ကား ၃ စီး၊ ရေသယ်ယာဉ် ၅ စီး၊ နေပြည်တော် မီးသတ်စခန်းမှ မီးသတ်ကား ၁၃ စီး၊ ရေသယ်ယာဉ် ၁ စီး၊ လယ်ဝေးမီးသတ်မှ ၂ စီးနှင့် ကြာပင်တိုက်ကင်းမှ ၁ စီး၊ သန္ဓေ ၇၅ ဦး၊ အရန် ၂၅ ဦးတို့ဖြင့် ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရသည်။
ထိုမီးလောင်မှုကြောင့် အိမ်ထောင်စု ၃ စုမှ ကလေးငယ် ၂ ဦး ပါဝင်သည့် လူ ၈ ဦး မီးဘေးဒုက္ခသည် ဖြစ်သွားကာ၊ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ ကျော်ရှိကြောင်းနှင့် အိမ်ပိုင်ရှင် ဦးကျော်နိုင်အား အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယမီးလောင်မှုမှာ ဦးကျေးကွက်သစ်ရှိ ဦးကျော်မင်းထွန်း၏ အလျားပေ ၆ဝ ၊ အနံပေ ၂ဝ ရှိ ကြက်ခြံ အဆောက်အဦး လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးသတ်ကား ၂ စီး၊ ရေသယ်ယာဉ် ၂ စီးတို့ဖြင့် ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရကြောင်းနှင့် မီးလောင်မှု အကြောင်းရင်းမှာ ထမင်းအိုးတည်ရာမှဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဥရောပ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုတချို့ စတင်
ဥရောပ မှ လေယာဉ် ယနေ့ဂျပန် သို့ဆင်း သက်
ဥရောပသမဂ္ဂ ကူးသန်းသွားလာရေး ဝန်ကြီးတွေဟာ တနင်္လာနေ့ကပဲ ဗွီဒီယိုကတဆင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး မီးတောင်ပေါက်ရာကနေ ထွက်လာတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေကြောင့် လေယာဉ်ပျံသန်းမှုတွေ ပိတ်ထားရပြီး လေကြောင်းနဲ့ ခရီးသွားတွေ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်နေရတာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ နယ်မြေ ၃ ခု ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
နယ်မြေတခုမှာဆိုရင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေ အားလုံးကို ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး နယ်မြေ နောက်တခုမှာတော့ အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုတွေကို ခွင့်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျန်တဲ့ နယ်မြေမှာတော့ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုတွေကို လုံးဝ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ လုံးဝ အထိခိုက် မခံနိုင်ဘူးလို့ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ ကူးသန်းသွားလာရေး ကော်မရှင်နာ မင်းကြီး ဆင်မ် ကာလပ်စ် (Siim Kallas) က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေ တိုးမြှင့်ပျံသန်းခွင့် ပြုတာဟာ လေကြောင်းလိုင်းတွေ အတွက်ရော၊ ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ခရီးသည်တွေ အတွက်ရော၊ ဒီပြဿနာဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံလိုက်ရတဲ့ ဥရောပက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အတွက်ရော သတင်းကောင်းပါလို့ မစ္စတာ ကာလပ်စ်က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် ကြာသပတေးနေ့ ကတည်းက စဖြစ်တဲ့ ဒီပြဿနာကြောင့် စီးပွားရေးမှာ ဆုံးရှုံးထိခိုက်ရမှုဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ၂၀၀၁ စက်တင်ဘာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း အခြေအနေထက်တောင် ပိုဆိုးရွားပါတယ်။
ကန်တော်ကြီး X2O မဏ္ဍပ်ရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများတွင် လက်ပစ်ဗုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်၊ မှုခင်းရဲတို့ပါဝင်သော အဖွဲ့က ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့သော နေရာများကို စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်ဒေသမှူးနှင့် ရဲတိုင်းမှူးတို့က ကွပ်ကဲမှုပေးခဲ့သည်။ မဏ္ဍပ်ရှေ့ ရှုပ်ထွေးနေသော လူအုပ်အကြားသို့ လက်ပစ်ဗုံးသုံးလုံးကို ကိုက်အနည်းငယ်အကွာမှ ပစ်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လက်ပစ်ဗုံးစနက်တံ နှစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိက ပြောသည်။
"လူအုပ်ကြားထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တာပါ။ Safety Pin နှစ်ခုကို ရှာတွေ့တယ်။ တွေ့တဲ့နေရာနှစ်ခုက ကိုက် ၂ဝ လောက်ခြားတယ်။" ဟု သူကပြောသည်။
ပေါက်ကွဲမှုတွင် ဝမ်းဗိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်း အမှတ် ၄ စစ်ဒေသမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အုံးချို မှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခါနီးအချိန်မှ X2O မဏ္ဍပ်အနီးရှိ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ စုဝေးရာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ၉ ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၇ဝ ယောက်အထိ ဒဏ်ရာရခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဧပြီ (၁၈) တွင် ရန်ကုန်ဆေးဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသနေသော ဗုံးလူနာ ၅ဝ ကျော်ပဲ ကျန်တော့ကာ အများစုမှာ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောကုသရေးဆောင်တွင်ဖြစ်သည်။
စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ အရာရှိက- " ဖြစ်တဲ့အချိန် မဏ္ဍပ်ရှေ့မှာ လူ ၃ဝဝ နဲ့ ၄ဝဝ ကြားလောက် ရှိနေခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ ကားလမ်းပေါ်မှာ လူတွေကနေတဲ့အချိန်မို့လို့ ချိန်ကိုက်ဗုံး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ အစကတည်းက တွက်မိပါတယ်။ နောက်မဏ္ဍပ် စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ စီးကရက်ဘူးတွေကို မဏ္ဍပ်ပေါ်က ကြဲချနေတယ်၊ အဲ့ဒီစီးကရက်ဘူးတွေကို အောက်ကလူတွေလဲ ပြန်ပစ်တာမျိုးတွေ ရှိနေခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ စီးကရက်ဘူးတွေနဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့အတူတူ Grenade ကို ရောပြီး ပစ်ထည့်တာလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။"ဟု ဆိုသည်။
အစိုးရအရာရှိများ ရောက်ရှိချိန် အချိန်ကိုက်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်၍ ယင်းတို့အား ဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် အတိအကျပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ အဆိုပါအရာရှိကဆိုသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲသတင်း နအဖ ကြော်ငြာ ကပ်လုပ်ဆောင်နေ
အမှန်တကယ် ဆို sunroof ပါတဲ့ တောင်းအိပ်စ့် ကို ဖျောက် ပြီး နိူင်ငံရေး အမြတ် ရ ယူ မှာပါ။
ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ထုတ်လုပ်သည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်လာစေရန် အတွက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက ၎င်းတို့လက်ဝါးကြီးအုပ် ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာ ရောင်းချနေသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း တပ်ဆင်ခွင့် ပါမစ်ကို နေ့ချင်းပြီး ချထားပေးရန် စီစဉ်နေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း မိုလ်ဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး စနစ်ပေါင်း (၇) မျိုးခန့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးပေါ်လာသည့် (၅) သိန်းတန် စီဒီအမ်အေဖုန်းများကို နေ့ချင်းပြီးလျှောက်ထားရယူနိုင်ရန် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
“အခုတော့ တရက်တည်းနဲ့ ချထားပေးတာ မရှိသေးဘူး။ နောက်လထဲလောက် ချပေးနိုင်မယ်။ အခုက ရန်ကုန်မှာ နယ်အကန့်အသတ်မရှိ သုံးနိုင်အောင် စီစဉ်နေတုန်းပဲ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အင်ဂျင်နီယာက ပြောသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အစိုးရ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသော တယ်လီဖုန်း သုံးစွဲခွင့်ကို ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်လာပြီးနောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ထူးကုမ္ပဏီမှ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် အက်ဖ်အီးစီ (၂၀) တန် တခါသုံး ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းကတ်များ ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် ဂျီအက်စ်အမ် ဟန်းဆက်များ ၀ယ်လိုအားတက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အက်ဖ်အီးစီ (၅၀) တန် စီဒီအမ်အေ တခါသုံးကတ်များ ထွက်ပေါ်လာရာ လူထုက စီဒီအမ်အေဖုန်းများ ထပ်မံ ၀ယ်ယူလာရသည်။
“အခု (၂၀) တန် ဖုန်းကတ်က လိုင်းမကောင်းဘူး။ အမြဲတမ်း ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ ပြင်ပရောက်နေတာ။ နောက်ပိုင်းတော့ စီဒီအမ်အေက သုံးလို့ ရတယ်။ ဟန်းဆက်တော့ ပြောင်းသုံးရတယ်” ဟု ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိ မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ထူးကုမ္ပဏီနှင့် အေးရှားဝေါ ကုမ္ပဏီတို့မှ မိုဘိုင်းလ် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများ၊ ဆင်းကတ်များကို တရုတ်နှင့်ရုရှားကုမ္ပဏီများနှင့် ဖက်စပ်စက်ရုံများ ထူထောင်ကာ ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။
အေးရှားဝေါ ကုမ္ပဏီမှ တနှစ်လျှင် မိုဘိုင်းလ် လက်ကိုင်ဖုန်း အလုံးရေ (၁) သိန်း (၂) သောင်း ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်း ယခင် အသုံးပြုနေသည့် ကျပ် (၁၅) သိန်းတန် အမည်ပေါက် ဂျီအက်စ်အမ်၊ စီဒီအမ်အေ၊ ဆယ်လူလာတို့အပြင် နာဂစ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသည့် ကမ်းရိုးတန်း စီဒီအမ်အေ ဖုန်းများ၊ ယခုပေါ်ပေါက်လာသည့် တခါသုံး ဂျီအက်စ်အမ်နှင့် စီဒီအမ်အေ ဖုန်းကတ်များ၊ (၅) သိန်းတန် စီဒီအမ်အေ ဖုန်းများကြောင့် ဖုန်းဈေးကျသွားပြီး ငှားရမ်းသုံးစွဲမှုလည်း နည်းသွားကြောင်း သိရသည်။
“ဖုန်းတွေ များများ ချပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ဖုန်းက လူထုဆက်သွယ်ရေးမှာ လိုအပ်ချက် ရှိတယ်။ ဈေးကွက်လဲ ကြီးတယ်။ လူချမ်းသာသုံး ပစ္စည်းကနေ လူတိုင်းသုံးစွဲလာနိုင်မယ့် ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်လာမှာကို ကြိုဆိုပါတယ်” ဟု ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းဝင်တဦးက ပြောသည်။
မြန်မာလူထုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လှသည့် တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကြောင့် ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး ကိစ္စများတွင် အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သော စကိုက်နှင့် ပီဖင်းဂိုးတို့ကို သုံးစွဲနေကြရသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:39 PM No comments:
ဗုံးခွဲတရားခံများအား သတင်းပေးနိုင်ကဆုငွေချီးမြှင့်မည်ဟု တယက ကြေညာ
ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းရှိ X2O ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင် ဗုံးခွဲသည့် လက်သည်တရားခံများအား ထိရောက်စွာ သတင်းပေးနိုင်ပါက ဆုငွေ ကျပ် (၁၀) သိန်း ချီးမြှင့်မည်ဟု ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (တယက) မှ သိရသည်။
ယင်းညွှန်ကြားချက်ကို ဧပြီ (၁၈) ရက်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ခယက၊ မယက၊ ရယက ရုံးများတွင် ထင်သာမြင်သာ ကပ်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီ (၁၅) ရက် သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ မွန်းလွဲ (၃) နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းရှိ X2O ရေကစား မဏ္ဍပ်ရှေ့၌ ဗုံး (၃) လုံး ဆက်တိုက် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး လူ (၈) ဦးသေဆုံးကာ (၁၇၀) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုဗုံးပေါက်ကွဲမှုနောက်ပိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ညွှန်ကြားချက် အပြည့်အစုံမှာ “မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ၁၅.၄. ၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် မသင်္ကာဖွယ်ရာ အဖျက်သမား (၂) ဦးမှ လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်ထွက်ပြေးသွား၍ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ သေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့သူများအား တွေ့ရှိသူများက သတင်းပေးနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြရန်နှင့် ထိရောက်သော သတင်းဖြစ်ပါက ဆုငွေ ကျပ် (၁၀) သိန်းအား ရန်ကုန်တိုင်း အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ ချီးမြှင့်မည်” ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ယင်းညွှန်ကြားချက်ပါ မသင်္ကာဖွယ် အဖျက်သမား (၂) ဦးဟု တိကျစွာ ဖော်ပြထားခြင်းအပေါ် ပြည်သူများက သို့လော သို့လော အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေကြသည်။
“အဖျက်သမား (၂) ဦးဆိုတာ သူတို့အချင်းချင်းပဲ သိနိုင်မယ်။ အဲဒီနေ့က ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုက X2O ပိုင် လိုက်အေ့စ် ဇုန်ကားရှေ့မှာ ရှိနေတယ်။ အဲဒီမှာ X2O မဏ္ဍပ်ပေါ်က စူပါဝမ်းလင်ကွန်း စီးကရက်အမည်းဘူးလေးတွေ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ ထုတ်ပြီး စင်အောက်ကြဲတယ်။ ဒါလည်း သူတို့ နေ့စဉ်ဝေနေကျ။ အဲလို ဝေအပြီး မိနစ်ပိုင်းအကြာမှာ ၀ုန်းဆို ထကွဲတာ။ ကျနော့်အစ်ကို ခါးကိုတောင် ဗုံးစ စင်သွားသေးတယ်” ဟု မျက်မြင်လူငယ်တဦးက ဆိုသည်။
အခြား မျက်မြင်တဦးကလည်း “ပထမအလုံးနဲ့ မိနစ်ဝက်လောက်အကြာမှာ နောက်ထပ် ဗုံး (၂) လုံး ဆက်ပေါက်တယ်။ လူတွေဆိုတာ ဖွေးခနဲပဲ။ သွေးတွေနဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ဆို လက်ကလေးထောင်ပြီး လှုပ်ပြနေတာ တွေ့ရတယ်။ ကုလားကြီးတယောက်က ကျနော့်လက်ထဲမှာ သေသွားတယ်။ ရဲအုပ်တယောက်ဆို သွေးအိုင်ထဲကနေ အဘကို ခေါ်ပေးပါနဲ့ ကယောင်ကတမ်း အော်နေတယ်” ဟု ၎င်း၏ အတွေ့အကြုံကို ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ X2O မဏ္ဍပ်သည် နအဖဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့်၏ သူငယ်ချင်း ဖိုးအေးဆိုသူ၏ မဏ္ဍပ် ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်္ကြန်အကျနေ့ နေ့လယ်မတိုင်မီတွင် ဖိုးလပြည့်က (၁၅) မိနစ်ခန့် ရေပက်ကစားခဲ့ကြောင်း၊ ဗုံးပေါက်ကွဲသည့် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့တွင် X2O မဏ္ဍပ်သို့ ဖိုးလပြည့် ရောက်ရှိမလာကြောင်း မဏ္ဍပ်တွင် ရေကစားသူတဦးက ပြောသည်။
မျက်မြင်အချို့ကမူ “ဗုံးမပေါက်မီ နာရီဝက်လောက်အလိုမှာ စစ်ဒေသမှူးအပါအ၀င် ဒေသအာဏာပိုင်တွေ X2O မဏ္ဍပ်ရှေ့ ရောက်လာတယ်။ သတင်းရလို့လား၊ ပုံမှန် စစ်ရိုး စစ်စဉ်လား မသိဘူး။ မဏ္ဍပ်ဝန်းကျင်ကို လာစစ်တယ်။ ဗုံးရှိနေတယ်လို့လည်း ပြောနေကြတယ်။ အဲဒီ စစ်ဒေသမှူးသားနဲ့ ဖိုးလပြည့်တို့က အရင်ကတည်းက အငြိအစွန်းတွေ ရှိတယ်လည်း ကြားတယ်” ဟု ပြောကြသည်။
လုံခြုံရေးယာဉ်များနှင့် ဆေးရုံလူနာတင်ကားများ သင်္ကြန်အကျနေ့ကတည်းက ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း အသင့်ရှိနေခြင်း ကလည်း ထူးခြားချက်တရပ်ဟု အချို့က ယူဆနေကြသည်။
“လုံခြုံရေးယာဉ်တွေ ရှိနေတာ ထားတော့။ လူနာတင်ကားက ဘာလို့ ကြိုစောင့်နေရတာလဲ။ ဗုံးကွဲပြီးပြီးချင်း လူနာတင်ကား ချက်ချင်း ရောက်လာတယ်။ ဗုံးပေါက်တော့မယ်ဆိုတာ ကြိုသိနေလို့လား။ ဒါကြောင့် ကြိုတင်အကွက်ချ စီမံထားတာလား သံသယဖြစ်စရာပဲ” ဟု အချို့က မေးခွန်းထုတ်နေကြသည်။
X2O မဏ္ဍပ်ပေါ်ရှိ ရေကစားသူများ တဦးတယောက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း မရှိခဲ့ခြင်းအပေါ် အဆိုပါဗုံးသည် စီးကရက်ကြဲဖြန့်ချိန် သို့မဟုတ် အင်အားပြင်းလှသော ရေလုံးအားနှင့်အတူ ပါလာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အချို့က သုံးသပ်ကြသည်။
“ဗုံးအမျိုးအစား ခွဲခြားတာ၊ ဗုံးအစအန ရှာဖွေတာတွေကို စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာတပ်တွေသာ လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေ တယောက်မှ ရောက်မလာဘဲ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေက ပေကြိုးဆွဲ၊ မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးတွေ လုပ်နေတာ သဘာဝမကျဘူး။ ကိုယ့်လူနဲ့ကိုယ် အဖွင့်အပိတ် စည်းဝါးရိုက်ထားလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု အများက သံသယ၀င်နေကြသည်။
နအဖလက်ထက် အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်စေခဲ့သော (S2) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး၏ သမီး သေဆုံးသွားသည့် စာအိတ်ဗုံးကိစ္စ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရား ပန်းအိုးအတွင်းမှ ပေါက်ကွဲခဲ့သော ဗုံးကိစ္စ၊ ၀င်ဒါမီယာ (၅) လောင်းပြိုင် လူသတ်မှု၊ မြေနီကုန်း Junction 8 Center ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များသည် ယနေ့အထိ လက်သည်တရားခံ ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ရန်ကုန်က ပျော်စရာ မိသားစု မြန်မာသင်္ကြန်
အဲဒီမှာ ရေကစားတဲ့ သူတွေ ဘယ်လောက် ပျော် နေ တယ် ဆိုတာ...ရန်ကုန်က ပျော်စရာ မိသားစု မြန်မာသင်္ကြန်.... အစားစားလိုက် ရေပက်လိုက်....
နစ်နေမန်း မှ ရယူဖေါ်ပြသည်
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:28 PM No comments:
နေပြည်တော် သင်္ကြန် အဝေးကငေးကြည့် ထီးဆောင်းကြည့် .........သစ် ထုတ်တုန်းက သစ် ငုတ် တို အဲအနားလေးမှာ နကိုကရှိတာ အခုတော့ အနစ္စ...အနစ္စ
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:20 PM No comments:
ကဗျာ ဝတ္ထုများ သည် ကာရန် နဘေ အချိုးအစား မကျလျှင်သာရှိမည်
ဘဝများစွာ အတွေ့ အကြုံများစွာ အသက်များစွာ အခက်အခဲ များစွာအတွက် ရေးစပ်ပါသည်။
ပုသိမ်သား ဆိုလျှင် ငဝန်မြစ်တွင် ရေနစ်ကွယ်လွန် သွားသော သူငယ်ချင်း အတွက် ရေးဖွဲ့ ပါသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:56 AM No comments:
နှပ် လို့ လည်း စား
ပူတင်း လုပ် လည်းစား
အစေ့ တွေက များ
အစေ့ ရှိ ငြား ငှက် ဖျားခေါ်ဆောင်
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:09 AM No comments:
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ်
နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ တွင် မြန် ပြည် သားတွေ အေးချမ်းသာယာ စိတ်ချမ်းမြှေ့ ဖွယ် နှစ် သစ်ကို ကြိုဆို ပျော်ရွှင် နိူင်ကြပါစေ။
ဂျပန်နိူင်ငံ တိုကျိုကမြန်မာသင်္ကြန် ပြီးခဲ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့က စည်ကားစွာ ကျင်းပပြီး စီး ပြီး မြန်မာတို့ရဲ့ဇာတိသွေး ဇာတိမာန် အပြည့် ဖြင့် ပါဝင် ဆင်နွဲ ခဲ့ ကြသည်။
ကဲ ဆိုလို့ 
အရမ်းဆော့ ရင် ပြောတာ
မျက်စိနောက် နေလို့ ပြောတာ
မြင်းစီး ပြီး ရေကူး သန်တာနေ မှာ
ဒါနဲ့သင်္ကြန် ဆို
အားလုံး ကဲ ချင် ကြတာကြီး ပဲ
အဝေးရောက် လို့ 
(မကောင်းဆိုးဝါး မလာနိူင် အောင် ဂျပန် တွင် ဆားနဲ့ပက် ရသည်)
နှစ် ဟောင်း မကောင်း ဆိုးဝါး ဆားပက် ပြီး နှစ် သစ် ကိုကြိုနိူင် ကြပါစေ
သင်္ကြန်ပွဲတော်ရက်အတွင်း ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဗုံးများ ပေါက်ကွဲသဖြင့် အနည်းဆုံး လူ ၉ ဦး သေဆုံးကာ၊ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု သတင်းဌာနများအရ သိရသည်။
သင်္ကြန်ပွဲ ဆင်နွှဲသူများဖြင့် လူစည်ကားလှသော မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကန်တော်ကြီး၌ ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်က အနည်းဆုံး ဗုံး ၃ လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ရာမှ ထိုသို့ သေဆုံးဒဏ်ရာ ရရှိမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် ဆင်နွှဲနေသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားရာ နေရာအနီးရှိ X2O သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်။ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၀။
အခုပေါက်ကွဲမှုအပြင် နောက်ထပ် မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ဗုံးတလုံးကိုလည်း ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့အကြောင်း လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူ တဦးကို ကိုးကားပြီး အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတပုဒ်က ဖော်ပြပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှု ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာတော့ စုံစမ်းနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရဲစခန်းက ပြောပါတယ်။
MPRL E & P Pte Ltd က သီးနှံပျက်စီးမှုအတွက် လျော်ကြေးငွေများ ပေးအပ်
မကွေးတိုင်း မင်းဘူး(မန်းရေနံမြေ)သည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်ကစ၍ ရေနံ စထုတ်ခဲ့ပြီး သဘာဝအလျောက် တဖြည်းဖြည်း ရေနံထွက် ကျဆင်းလာသည်။ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို နိုင်ငံတော်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်း လာကာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ပြင်ပပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းရန် ကုမ္ပဏီများအား ဖိတ်ခေါ်သောအခါ မြန်မာ့ရေနံစွမ်းအင် MPRL က MOGE မြန်မာရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်းလာခဲ့သည်။
မင်းဘူးမြို့နယ်၊ မန်းရေနံမြေ၌ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးတူ ဖက်စပ်ပူးပေါင်း၍ ရေနံအထွက်တိုး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသော MPRL E & P Pte Ltd သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကစ၍ ယနေ့အထိ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
နိုင်ငံခြားရေနံရှာဖွေရေး SEISMIC ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် GECO PRAKLA ကို ငှားရမ်းကာ 3D SEISMIC ကို စနစ်တကျ ရိုက်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပျက်စီးခဲ့သော သီးနှံများအတွက်လည်း လျော်ကြေးငွေများကို ပေးလျော်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ၁၃ နှစ်ကြာပြီး နောက်မန်းရေနံမြေ၏ ရေနံတွင်းနက်၊ အသစ်များ ဆက်လက်တူးဖော် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ SIETCO ရေနံရှာဖွေရေး SEISMIC ကုမ္ပဏီကို ငှားရမ်း၍ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ ရက်မှ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မတ်လအထိ 2D SEISMIC ရိုက်ယူလျက်ရေနံရှာ ဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း MPRL မှ Chief Premit/Public Realations Officer ဦးမောင်မောင်ခန့်က ရှင်းပြသည်။ ထို့သို့လုပ်ဆောင်ရာ၌ နိုင်ငံတော်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖြစ် သောကြောင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များက အဆင့်ဆင့်တာဝန်ရှိသူများ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ် ငွေ့လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သိရသည်။
ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးပတ်မှ စ၍ သီးနှံလျော်ကြေးပေးရေးအဖွဲ့မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ခွင့်ပြုချက်များရယူကာ သက်ဆိုင်ရာ ဆိုက်စမစ်လိုင်းဖြတ်သန်းမည့် မကွေး၊ မင်းဘူး၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်များအတွင်းက ကျေးရွာပေါင်း ၆၅သို့ နေ့စဉ် တစ်လခွဲခန့်ကြာအထိ ရေနံရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းများ၏ သဘောသဘာဝကို ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော သရုပ်ဖော်ပုံများ စာစောင်များဝေငှသည်။ ပျက်စီးသီးနှံများအတွက် ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဌာန ဝန်ထမ်းများနှင့် စနစ်တကျတိုင်းတာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ပေးသော အထွက်နှုန်းနှင့် ဒေသပေါက်ဈေး များကိုကျေးရွာတောင်သူများ သဘောပေါက် နားလည်အောင် ရှင်းလင်းလျက် တောင်သူများ၏ ပျက်စီးသွားသော မြေနှင့်လယ်ကန်သင်းရိုးများကို နဂို မူလအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်လည်ပြုပြင် ပေးခဲ့သည်။
ယခုအခါ 2D SEISMIC လုပ်ငန်းအတွက် တိုင်းတာဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည့် မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် အတွင်းရှိ တောင်သူများကို လျော်ကြေး ငွေများစတင်ပေးလျက်ရှိရာ မတ် ၄ ရက် နံနက်က ပထမအကြိမ်အဖြစ် မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် ကံကုလားကျေးရွာ ရွာဦးကျောင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းပေးအပ်ပွဲသို့ MOGE မန်းရေနံမြေမှ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးမြစိန်၊ မင်းဘူးခရိုင် အေးချမ်းသာယာရေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီအတွင်းရေးမှူး ဦးတင်လှိုင်၊ မြို့နယ်အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်စိုးထွန်း၊ မြို့နယ်မြေစာရင်းဌာနဦးစီး မှူး ဦးညိုကြီး MPRL E & P Pte Ltd မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက ကံကုလာ ကျေးရွာနှင့် ကံသစ်ကျေးရွာများမှ သီးနှံပျက်စီးမှုလျော်ကြေးငွေရရှိသော တောင်သူ ၅၆ ဦးအား လျော်ကြေးငွေများပေးအပ်ခဲ့သည်။
SEISMIC ဖြတ်သန်းမည့် မကွေး၊ မင်းဘူးနှင့် ပွင့်ဖြူမြို့နယ်များအတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၆၅ ရွာရှိပြီး 2D SEISMIC ရိုက်ယူဆောင်ရွက်သော ကီလိုမီတာပေါင်း ၃၁ဝ.၂ဝ အတွက် သီးနှံလျော်ကြေးငွေ ကျပ်သိန်း ၉ဝ ဝန်းကျင် ရှိကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ နှစ်သစ် ကူး သင်္ကြန် အကြိုနေ့ ကြိုဆို ပျော် ရွှင် နိူင်ကြပါစေ။
မြန်မာ နှစ်သစ် ကူး သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ကြိုဆို ပျော် ရွှင် နိူင်ကြပါစေ။ ။
မြန်ပြည် တုန်း က သင်္ကြန်မှာ အ တူတူ လည် ဖူးတဲ့ ကိုတက် သြစတြေးလျှ က အကြိုနေ့မှာ ဖုန်း ခေါ်ပြီး မတ်စ်စေ့နားထောင် ရတော့ မြန်ပြည် ကို ဘယ်နိူင် ငံကို ပဲရောက်နေ နေ မြန်ပြည် နှစ် ကူးတဲ့ သင်္ကြန်ကို မြန်ပြည်သား တိုင်း သတိရနေဆိုတာ ရယ်.... မြန်ပြည် နှစ်ကူး သင်္ကြန်က တရက် တည်းမှ မဟုတ်တာ ပျော်စရာတွေနဲ့ငယ်ဘဝကလို သံချပ်တွေ ကြားရမည့် နေ့တွေ မဝေးပါရစေ မြန်ပြည်သားတွေ
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၁ ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း အင်္ဂါနေ့ 
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:26 AM No comments:
နှစ်သစ် ကူး သင်္ကြန်ကို ကြိုဆို ပျော် ရွှင် နိူင်ကြပါစေ
နှစ်သစ် ကူး သင်္ကြန်ကို ကြိုဆို ပျော် ရွှင် နိူင်ကြပါစေ။ ။
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၁ ခုနှစ် တန်ခူးလကွယ် တနင်္လာနေ့ 
ယိုးဒယား နှစ်သစ် ကူး သင်္ကြန် မှာ လိုအင် ဆန္ဒ ပြည့်ဝ နိူင်ကြပါစေ
.၂၀၁၀ သင်္ကြန်က ကဆုန်လမှာ ကျရောက်မယ့် သင်္ကြန် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကျတဲ့ သင်္ကြန် နှစ်တွေမှာ ထူးထူး ခြားခြား ဖြစ်ရပ် ဆန်းတွေ ရှိခဲ့တယ်။ လူတွေ မသိနိုင်တဲ့ ကာလတွေ ကတည်းက ရှိခဲ့သလို၊ ဒီဘက်ခေတ် လူတွေ မှတ်မိနိုင်လောက်တဲ့ ကာလတွေမှာလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့က ကဆုန်လဆန်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ကဆုန်လမှာ သင်္ကြန်ကျတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အဲဒီလိုနှစ်တွေကနေ စပြီး "တပေါင်းတန်ခူး အကြောင်းထူးမယ်" ဆိုတဲ့ စကားတရပ် ပေါ်ထွန်း ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်နဲ့ မြန်မာနှစ် တနှစ်တည်းကျတဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ မူလ ပါလီမန်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဖျက်သိမ်းပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရ တက်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈ ဧပြီ ၁၆ ရက်နေ့ဟာလည်း ကဆုန်လဆန်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနှစ်လည်း ထူးခြားမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့ဟာလည်း ကဆုန်လဆန်း သင်္ကြန် ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီနှစ်မှာလည်း ထူးထူးခြား ခြား အပြောင်းအလဲတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၆ ရက်နေ့ဟာလည်း ကဆုန်လဆန်းပါပဲ။
စံဇာဏီဘို (ဓာတ်ပုံ - ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်)
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပါတီ ကို ဖြေရှင်းရန်ခေါ်
ထိုင်းအစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အနီဝတ် ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ စစ်သားတွေကြားမှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုတွေ၊ ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့် ၂၀ ထက်မနည်း သေဆုံးပြီး ၈၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေမှာတော့ အနီဝတ် ဆန္ဒပြသူတွေ ဘန်ကောက်မြို့လယ်ကောင်ကို အလုံးအရင်းနဲ့ ပြန်လည် စုဝေး ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရက ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကို အနီဝတ် ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်တွေက လူသတ်သမားတွေနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတာတွေ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
မနေ့က ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်း ပေါက်ကွဲမှုကြီးတွေကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာ ရိုက်တာစ် သတင်းဌာနရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသား ဗွီဒီယိုနဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် တဦးနဲ့ စစ်သား ၅ ဦး ပါဝင်တယ်လို့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက အတည်ပြုပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရ ပြောခွင့်ရသူ အဆိုအရ ထိုင်းစစ်တပ်က တကယ့် ကျည်ဆံအစစ်တွေကို မသုံးဘဲ ရာဘာကျည်ဆံတွေကိုသာ အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ကလာတဲ့ သတင်းတွေအရ အနီဝတ် ဆန္ဒပြသူတွေက ထိုင်းစစ်သားတချို့ကို ဓားစာခံတွေအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့နယ် စော်ဘွားရေရှင် ကျေးရွာတွင် ယခုလ ၉ ရက်နေ့က နေအိမ် ၂၃ လုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားကာ၊ လူဦးရေ ၁၂ဝ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တောမီးမှတဆင့် ဝါးကပ်ကာ သက်ကယ်မိုးနှင့် ပျဉ်ထောင်ကာ သွပ်မိုး နေအိမ် ၂၃ လုံး ကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်းနှင့် မီးဘေးဒုက္ခသည် ၁၂၆ ဦင်္း ရှိကြောင်း ကလေးမြို့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် ဒေသခံများ အဆိုအရ သိရခြင်း ဖြစ်သည်။
“၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ၂ နာရီခွဲလောက်က လောင်တာပါ။ တောမီးကနေ လူနေအိမ်တွေကို ကူးလောင်တာပါ။ မီးသတ်ကား ၇ စီး သွားတယ်။ ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ မီးပြန်ငြှိမ်းနိုင်တယ်” ဟု ကလေးမြို့ မီးသတ်ဌာနမှ တပ်ကြပ်ကြီး ဦးဖိုးနီက ပြောသည်။
စော်ဘွားရေရှင်သည် ကလေးမြို့မြောက်ဘက် ၃၅ မိုင် အကွာတွင် ရှိကာ၊ ကလေး-တမူး ကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေပေါင်း ၅ဝဝ ခန့် ရှိသည်။
“C Group က လောင်တာပါ။ ကလေးမြို့ကနေ တမူးမြို့သွားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ လောင်တာဖြစ်တယ်။ လမ်းအနောက်ဘက်က ၅ လုံး လောင်တယ်။ လမ်းအရှေ့ဘက်က ၁၈ အိမ် လောင်တယ်။ ညနေပိုင်း ၃ နာရီလောက်မှာ ကျနော်တို့ ရုံးကို အကြောင်းကြားတယ်။ ရုံးကား ၇ စီး ချက်ချင်း သွားတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
စော်ဘွားရေရှင် ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့ဝင် ဦးရိုဆန်းက “လူအသေအပျောက်တော့ မရှိဘူး။ ဒဏ်ရာရတာလည်း မရှိကြဘူး။ ဦးခုမ်းလျံ နေအိမ်ကို မီးစကျလို့ ရွာထဲကို ကူးတာ။ လေက တိုက်တော့ မီးတအားမြန်တယ်။ လူအားနဲ့ လုံးဝမနိုင်ဘူး။ မီးသတ်ကားသာ အချိန်မီ မရောက်ရင် တရွာလုံး ပြာကျမှာ” ဟု ပြောသည်။
မီးလောင်နေစဉ် ကလေးမြို့ မြို့နယ်နှင့် ခရိုင်အဖွဲ့ဝင် လူကြီးများ ရောက်ရှိလာကြောင်းနှင့် မည်သူ့ကိုမျှ အရေးယူခြင်း မရှိဘဲ နေအိမ်များ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရန် အစိုးရထံ တောင်းဆိုပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ယခုအခါ မီးဘေးဒုက္ခသည်များသည် တွဲဖက်အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ခေတ္တနေထိုင်လျက်ရှိပြီး လိုအပ်သည့် အစားအသောက်နှင့် အဝတ်အထည်များကို ဆွေမျိုးသားချင်းများက ပေးဝေနေကြောင်းနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များက ဒုက္ခသည်များအတွက် တမိသားစုစီ နေထိုင်နိုင်ရန် ယာယီတဲအိမ်များ ဆောက်လုပ်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးမှာ စုစုပေါင်း ကျပ် သိန်း ၂ဝ ခန့်ရှိကြောင်း တပ်ကြပ်ကြီး ဦးဖိုးနီက ခန့်မှန်းသည်။
ယခုမီးလောင်မှုကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ရပ်မိရပ်ဖများက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သော တွဲဖက်မူလတန်းကျောင်း တကျောင်းလည်း လောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားသည်။
ပိုလန်သမ္မတ ရုရှားနိုင်ငံ တွင်လေယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံး
ပိုလန်နိုင်ငံက အမျိုးသား ကြေကွဲဖွယ်ရာနေ့အဖြစ် ကြေညာထားပြီး ဒါဟာ တကယ့်ကို ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်ပဲလို့ ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နယ် တက် က ၀ါဆော မြို့မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ပြီး ပြောဆိုပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ပိုလန် ၂၂,၀၀၀ ကို ဆိုဗီယက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက သတ်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၇၀) ပြည့် အထိန်းအမှတ်ပွဲ ကျင်းပမယ့် စမောလက် မြို့အနီး ကာတဲ မြို့ကိုအသွားမှာ ပိုလန်သမ္မတ နဲ့အတူ တခြား ၈၈ ယောက်တို့ အခုလို လေယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံးသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမား၊ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒန်ဘရောင်း အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များက ၀မ်းနည်းကြေကွဲကြောင်း ပိုလန် ၀န်ကြီးချုပ်ထံ အကြောင်းကြားရပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:16 AM No comments:
ရေနံချောင်း ဒီဂရီကောလိပ် ကျောင်း ဘော်ဒါဆောင် မီးလောင်
မကွေးတိုင်း ရေနံချောင်း ဒီဂရီကောလိပ် ကျောင်း ဘော်ဒါဆောင် ၃ ဆောင် မီးလောင်
မြနန်းပုံ ဆောင် မှ စတင် လောင် ပြီး ကြေးမုံဆောင် နှင့် ရေနံ အရာရှိဟောင်း ဦးစိန်တိုး ပိုင် အဆောင် တစ် ဆောင် တို့ ဖြစ်သည်။
၉ရက် နေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ခန့်က စတင် လောင် ကျွှမ်း သည် ဟု သိရသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:54 AM No comments:
မိုးကြိုးမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိဟု မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒသတိပေး
“မိုးကြိုးမုန်တိုင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ လေ့လာမှုအရ ဧပြီလမှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်းဖြစ်ရင် ၄၂ ရာနှုန်းက မြန်မာပြည် ဝင်လေ့ရှိတယ်။ ၂ လုံးဖြစ်ရင် တလုံးလောက် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် သတိထားရမယ်” ဟု ဦးထွန်းလွင်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ၁ နာရီလျှင် မိုင် ၄ဝ အထိရှိသော လေပြင်းများ တိုက်ခတ်နိုင်ပြီး အင်အားပိုကြီးသော လေဆင်နှာမောင်းနှင့် ဆိုက်ဆင်းလေပြင်းများဆိုပါက ရေယာဉ်များအတွက် အန္တရာယ် ရှိနေပြန်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် ဧပြီလ ပျမ်းမျှအပူချိန်အထက် (၃-၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အထိ ပိုလာနေရာ နေပူရှိန်မှ ကာကွယ်ကြရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယမန်နေ့က မကွေးတိုင်း မင်းဘူးမြို့တွင် ၄၅.၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၁၁၄.၁ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) ဖြင့် ၄၆ နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံး အပူချိန် စံချိန်သစ်တင်ခဲ့သည်ဟု မိုးဇလက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထို့အပြင် ချောက်၊ မင်းဘူး၊ မကွေးမြို့တို့တွင် ၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော် အထိပူခဲ့သည်။
၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံးတွင် မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သေဆုံးသူ ဦးရေမှာ တနှစ်လျှင် ၁ဝဝ ဦး ကျော်ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ပြည်သူလူထု အထိတ်တလန့်ဖြစ်မည်ကို စိုးရွံ့သည်ဆိုကာ မိုးလေဝသတင်းများကို စစ်အစိုးရက လျော့ပေါ့ထုတ်ပြန်လေ့ရှိရာ မုန်တိုင်းသတိပေးချက် ခေါင်းစဉ်များတွင် “အထူးသတိပေးချက်” ဟု ဖော်ပြလျှင် သတိထားသင့်ကြောင်း မိုးဇလအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
လူ ၁ သိန်း ၄ သောင်းခန့် သေဆုံး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခဲ့သော ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မေလက ဖြစ်ပွားခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်း မတိုင်မီ ကြိုတင်သတိပေးမှု မရှိခဲ့၍ စစ်အစိုးရကို အပြစ်တင်ခဲ့ကြသည်။
သစ်တောများအား အလွန်အကျွံ ခုတ်ထွင်ရောင်းချနေသဖြင့် သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာမှုသည်လည်း အပူရှိန် မြင့်တက်လာရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတခုဖြစ်ကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာသူများက ဆိုသည်။
Kyrgyzstan မှာ အတိုက်အခံ အာဏာသိမ်းကြောင်း ကြေညာ
အာရှအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ကီးရ်ဂစ္စတန်နိုင်ငံ (Kyrgyzstan) က အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့က တိုင်းပြည်ရဲ့ အာဏာကို ရယူလိုက်ပြီလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတ၀န်းက မြို့ကြီးတွေ တော်တော်များများမှာ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ လူပေါင်း ၄၀ လောက် အနည်းဆုံး သေဆုံးပြီး လူ ၄၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားပြီး တရက်အကြာမှာပဲ အတိုက်အခံတွေက နိုင်ငံတော် အာဏာကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ ပြောလိုက်တာပါ။
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်က ယာယီအစိုးရကို နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ရိုဇာ အိုတန်ဘာယေးဗား (Roza Otunbayeva) နဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီလို့ မနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ် ဒနီယာ ဥစနော့ဗ် (Daniyar Usenov) က သူ ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်ပါ့မယ်လို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် သဘောတူလိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်ကနေ သူတို့အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့လိုက်ပြီလို့ မနေ့တုန်းက ပြောခဲ့တာပါ။ အတိုက်အခံတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတည်ပြုချက်တော့ မရသေးပါဘူး။
ကီးရ်ဂစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ ကူရ်မန်ဘိခ် ဘာကီယိဗ် (Kurmanbek Bakiyev) က အခု ဘယ်မှာရောက်နေလဲ မသိရပါဘူး။ အတိုက်အခံတချို့ ပြောတာကတော့ သမ္မတဟာ မြို့တော်ကနေ ထွက်ခွာသွားပြီး သူ့ရဲ့ အာဏာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံတောင်ပိုင်း အို့ရ်ှမြို့ (Osh) မှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပဋိပက္ခတွေဟာ မြို့တော်တင်မက တခြားမြို့တွေမှာပါ ဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်း သတင်းတွေလည်း ထွက်နေပါတယ်။ မြို့တော် ဘီရ်ှကစ် (Bishkek) မှာတော့ ညပိုင်းမှာ သေနတ်သံတွေ ဆက်ပြီး ကြားနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေ အတည်ပြု ပြောဆိုတာက လူ ၄၀ သေဆုံးတယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ အတိုက်အခံတွေ ပြောတာကတော့ အနည်းဆုံး လူ ၁၀၀ လောက် အသတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကတော့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့ ပါတီအားလုံးက ဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့ ပြောပါတယ်။ အာဖဂန်စစ်ပွဲအတွက် အမေရိကန်ရဲ့ လေတပ်စခန်းဟာ ကီးရ်ဂစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ရှိပြီး တိုင်းပြည် မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေလို့ မနေ့ကတော့ လေယာဉ် အဆင်းအတက် မလုပ်ပါဘူး။
ဘန်ကောက်မှာ အရေးပေါ်ဥပဒေ ထုတ်ပြန်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၀န်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ဂျာဂျီဝ (Abhisit Vejjajiva) က မြို့တော် ဘန်ကောက်မှာ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပိုင်းမှာ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသမားများက ပါလီမန် အဆောက်အဦးအတွင်း အင်နဲ့အားနဲ့ ခဏ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နာရီအတန်ကြာမှာ ၀န်ကြီးချုပ် အဘီဆစ်က အဲဒီလို ကြေညာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှပ်အင်္ကျီအနီဝတ် ဆန္ဒပြသမားများက လွှတ်တော် အဆောက်အဦးကို ၀ိုင်းရံထားရုံမက အထဲကိုပါ ၀င်ရောက်ခဲ့ကြလို့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးပွဲ ရပ်တန့် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တချို့လည်း ထွက်ပြေးကြရာ တချို့ကိုတော့ ရဟတ်ယာဉ်များနဲ့ ကယ်တင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆန္ဒပြမှုတွေဟား လတ်တလော ရက်များအတွင်း ပိုမို ပြင်းထန်လာကြပြီး စနေနေ့က ဆန္ဒပြသမားတွေဟာ သူတို့ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ဌာနကနေ အင်္ဂါနေ့မှာ ထိုးဖောက်ထွက်ခဲ့ရင်း လုံခြုံရေး ရဲများနဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ကန့်ကွက်ပွဲများ ပျံ့နှံ့ ကြီးထွားလာမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် အကြမ်းဖက် ရင်ဆိုင်ရေးကို ရှောင်ရှားလိုကြောင်း ထိုင်းစစ်တပ်က ဆိုပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ လက်ရှိ စီးပွားရေး အဆောက်အဦးတွေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ပျက်ပြားမှာကို စိုးရိမ်လို့လည်း လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက ဆန္ဒပြသမားတွေကို မနှိပ်ကွပ်ချင်ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ Human Rights Watch လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ကလည်း ဆိုပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:46 AM No comments:
အင်ဒိုနီးရှားမှာ အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမားတြားကျွန်းမှာ ၇.၈ ပြင်းအားရှိတဲ့ ငလျင်တခု လှုပ်သွားပြီး ဒေသတွင်း ဆူနာမီ ဒီရေလှိုင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ငလျင်က ဗုဒ္ဓဟူး အရုဏ်တက်မတိုင်ခင် လှုပ်သွားတာဖြစ်ပြီး ဆူမားတြားကျွန်း အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၁၃၀ နီးပါးနေရာ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာရေအောက် ဗဟိုပြုပြီး လှုပ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူနာမီ ဒီရေလှိုင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်း အကြီးအကျယ် အပျက်အစီးများမယ့် ဆူနာမီ ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ ခန့်မှန်းမထားပါဘူး။ အပျက်အစီး၊ အသေအဆုံး စာရင်းလည်း သေချာ မသိရသေးပါဘူး။
အာချေးပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းက ဆီမီလူကျွန်း (Simeulue Island) မှာ လျှပ်စစ်မီးတွေ ပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ မျက်မြင်တွေက ပြောပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ အာချေးပြည်နယ်မှာ ၉.၁ ပြင်းအားရှိတဲ့ ငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်ခဲ့တုန်းက လူပေါင်း ၂၂၀,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဆူနာမီ ဒီရေ လွှမ်းမိုးမှုကြီးတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
စင်ကာပူ ရေနံတင်သင်္ဘော ပြန်ပေးဆွဲခံရ
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ဆိုမားလီးယား သူပုန်တွေ ပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့ ရေနံတင် သင်္ဘောကြီးကို ကြားဖြတ် ကယ်တင်နိုင်ဖို့ တောင်ကိုရီးယားက စစ်သင်္ဘောတစင်းကို စေလွှတ်လိုက်ပါပြီ။
စင်ကာပူပိုင် တောင်ကိုရီးယားမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဆမ်ဟို ဒရင်းမ် (Samho Dream) ရေနံတင် သင်္ဘောကြီးဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၁၆၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရေနံတွေ အီရတ်ကတင်ပြီး အမေရိကန်ကို အသွား တနင်္ဂနွေနေ့က ဆိုမာလီကမ်းလွန် ၉၀၀ လောက်မှာ ပြန်ပေးအဆွဲခံသွားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောပေါ်မှာ တောင်ကိုရီးယား ၅ ယောက်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ၁၉ ယောက် စုစုပေါင်း သင်္ဘောသား ၂၄ ယောက် ပါသွားပါတယ်။
ဆိုမားလီးယား ရေပြင်နားမှာ ကင်းလှည့်နေတဲ့ တောင်ကိုရီးယား ဖျက်သင်္ဘော ပြန်ပေးဆွဲခံထားရတဲ့ ရေနံတင်သင်္ဘောဆီ ရောက်ဖို့ တရက်လောက် ကြာမယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ နယ်သာလန် ရေတပ်က ဂျာမဏီ ကုန်တင်သင်္ဘောကို ဆိုမာလီ ကမ်းရိုးတန်းမှာပဲ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး ပြန်ပေးဆွဲသူ ၁၀ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်္ဘောသား ၁၅ ယောက်ကိုလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရှိဘဲ ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စင်္ကာပူရောက် စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကျင်းပပြုလုပ်သော၊ မြန်မာတို့၏ စွယ်တော်ရိပ်သင်္ကြန် ၂၀၁၀
စင်္ကာပူရောက် စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကျင်းပပြုလုပ်သော၊ မြန်မာတို့၏ စွယ်တော်ရိပ်သင်္ကြန် ၂၀၁၀ ကိုအောက်ပါအတိုင်း ပါဝင်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါကြောင်း၊
နေ့ရက် ။ ။ ၁၇.၀၄.၂၀၁၀ (မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ရက်နေ့)၊ စနေနေ့
အချိန် ။ ။ ညနေ ၄:၄၅ နာရီ မှ ည ၉း၀၀ နာရီ အထိ
နေရာ ။ ။ Kreta Ayer People's Theatre. 30A, Kreta Ayer Road. Singapore 088997. (5 minutes walking distance from China Town and Outram Park MRT Stations)
စွယ်တော်ရိပ် သင်္ကြန် ၂၀၁၀ တွင်
စက်မှုတက္ကသိုလ်မူပိုင်အငြိမ့်ဖြစ်သော စွယ်တော်ရိပ် အငြိမ့်၊
နံမည်ကျော် စွယ်တော်ရိပ် ပြဇတ်
စွယ်တော်ရိပ် စင်တင်တေးဂီတ (Alternate Crunch Rock Music Band) နှင့်
မြန်မာ့ရိုးရာ အဆိုအက များ အပြင်၊
မျိုးဆက်သစ် မြန်မာလူငယ်ကလေးများပါဝင်သော Jokerz Crew အဖွဲ့၏ Street Dance
စသည်ဖြင့် စုံလင်စွာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်...။
လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ဆက်သွယ်ပါရန်..။ (၂၅ ဒေါ်လာ၊ ၂၀ ဒေါ်လာ နှင့် ၁၅ ဒေါ်လာ လက်မှတ်များဖြစ်ပါသည်)
Phyu Phyu Thein : 91095406
Thant Zin Myo : 92381646
Shwe Zin Ma : 93245885
Wai Mar : 92330484
အထက်ပါနံပါတ်များအပြင်၊ ရွှေသရဖူ (#03-04) ပင်နီဆူလာ ပလာဇာ၊ ဖုန်း 63334180 တွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ခင်ဗျား..။
မန္တလေးသားစစ်စစ် from ချမ်းမြစိုး on Vimeo.
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:21 PM No comments:
မြန် ပြည် ပြန် ပြီး ရွှေးကောက် ပွဲ ဝင် နိူင် ကြပါစေ...
ဗုံးဖောက်ခွဲသူကို ဖမ်းမိထားကြောင်း ပြည်တွင်းထုတ်ဂျ...
ဖုန်းတပ်ဆင်ခွင့် နေ့ချင်းပြီးချထားရန် ဆက်သွယ်ရေးက ...
MPRL E & P Pte Ltd က သီးနှံပျက်စီးမှုအတွက် လျော်ကြေ...
မြန်မာ နှစ်သစ် ကူး သင်္ကြန် အကြိုနေ့ ကြိုဆို ပျော် ရ...
နှစ်သစ် ကူး သင်္ကြန်ကို ကြိုဆို ပျော် ရွှင် နိူင်ကြပါ...
ယိုးဒယား နှစ်သစ် ကူး သင်္ကြန် မှာ လိုအင် ဆန္ဒ ပြည့်ဝ ...
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပါတီ ကို...
ရေနံချောင်း ဒီဂရီကောလိပ် ကျောင်း ဘော်ဒါဆောင် မီးလေ...
မိုးကြိုးမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိဟု မိုးလေဝသနှင်...
စင်္ကာပူရောက် စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကျင်းပပြု...
မန္တလေး နှစ် ၁၅၀ ပြည့် ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင် တ...